Umbutho wezoQoqosho: Ulonwabo lweMveliso
Ubuncedo bendlela yoqoqosho yokulinganisa ulonwabo okanye lonwabe ngemveliso, inkonzo, okanye umsebenzi kunye nendlela ehambelana ngayo nezigqibo abantu abazenzayo ekuthengeni okanye ukwenza. Amanyathelo amanyathelo amaxabiso (okanye iingxaki) ekusebenziseni into enhle okanye inkonzo okanye emsebenzini, kwaye nangona i-utility ayinakulinganiswa ngokuthe ngqo, inokuthi ifakwe kwisigqibo esenziwa ngabantu. Kwizoqoqosho, ukusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni kuvame ukuchazwa ngumsebenzi, njengomsebenzi wokubonakalisa umsebenzi.
Ukulinganisa ukusetyenziswa kwezinto ezithile ezintle, iinkonzo, okanye abasebenzi, ukusetyenziswa kwezoqoqosho ngokulindelekileyo okanye ngokungahambelani nesebenzi ukubonisa inani lokuzonwabisa okanye ukuthenga into. Ubuncedo obulindelekileyo bubhekisela kusetyenziso lwe-arhente ejongene nokungaqiniseki kwaye ibalwa ngokubhekiselele kwimeko enokwenzeka kunye nokwakha isilinganiso esiphezulu sobutyebi. Ezi zindinganiso zichongiwe ngamathuba okuba ngamnye urhulumente anikwe uqikelelo lwe-ejenti.
Ubuncedo olulindelekileyo lusetyenziswe kuyo nayiphi na imeko apho umphumo wokusebenzisa okulungileyo okanye inkonzo okanye ukusebenza kubonwa ngumngcipheko kumboleki. Okubalulekileyo, kucatshulwa ukuba isigqibo somntu singasisoloko sikhetha ukhetho oluphezulu olulindelekileyo lokutyala imali. Oku kunjalo kumzekelo wokuqinisekisa ukuhlawulwa kwe-$ 1 okanye ukugembula ukuhlawulwa kwe-$ 100 kunye nomathuba wokufumana umvuzo kwi-1 ngo-80, ngaphandle kokufumana nto. Oku kubangela ukubaluleka okulindelekileyo kwe $ 1.25.
Ngokomxholo wokulindela owenziweyo, umntu unokuba ngumngcipheko wokuba abuye akhethe isiqinisekiso esincinci kunokuba abe ngumngcakazo wexabiso elilinganiselwa ku-1.25.
Ngenxa yale njongo, i-utility engqalileyo injenge-utility total, ibalwe ngomsebenzi isebenzisa iinguqu zexabiso, ukubonelela nokufumaneka.
Yakha ikota yokusebenzisa ukucacisa kunye negrafu izinto ezincinci kunye neenkcukacha eziqulunqa ukulinganiswa kwemveliso yamakhasimende. Ukubala kuxhomekeke kumsebenzi wezinto eziguqukayo ezifana nokufumaneka kweempahla kwiimarike (elineyona ndawo ephezulu) ngokumalunga nomvuzo womntu kunye nokutshintsha kwintengo yempahla. Nangona ngokuqhelekileyo, abathengi bacinga ngezinto abazikhethayo ngokubhekiselele ekusebenziseni izinto kunokusetyenziswa kwexabiso.
Ngokwe-microeconomics, umsebenzi ongekho ngqo ungumsebenzi wenkcitho (xa ixabiso lugcinwa rhoqo), apho umsebenzi wenkcitho unquma inani elincinci lemali umntu kufuneka achithe ukuze athole nayiphi na imali yesibonelelo.
Emva kokuba uqaphele zombini le mi sebenzi, unokwenza umlinganiselo wokusetyenziswa kwezinto ezintle okanye iinkonzo ngenxa yokusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni ichazwa njengento esetyenziswayo ekudleni enye iyunithi eyongezelelweyo. Ngokwenene, ukusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni yindlela yophili loqoqosho ukuchonga inani labathengi abathengi.
Ukusebenzisa le nto kwi-theory yezoqoqosho ixhomekeke kumthetho wokunciphisa ubuncwane obuncitshiswayo obonisa ukuba iyunithi nganye elandelayo yomveliso okanye ichanekileyo iya kuyancipha inenani. Kwisicelo esisebenzayo, oko kuthetha ukuba xa umthengi esebenzise ityunithi enye yezinto ezilungileyo, njengesiqhekeza se-pizza, iyunithi elandelayo iya kuba neenkonzo ezincinci.
Inkcazo kunye nokuSebenziselwa kweeMpawu eziVimbayo (IV) kwi-Econometrics
Iirhafu - Impembelelo yezoTyalo zezoQoqosho
I-Bogey kathathu: Yiyiphi imilinganiselo yeGalofu yokuPhatha kwexesha elide
Iziphakamiso zomthandazo kwizikolo zikaRhulumente
Ukuqalisa iProjekthi yokubuyiselwa kweCorvette